WARBIXIN: Alexis Sanchez, Riyad Mahrez, Daniel Sturridge & Shan Saxiix Oo Premier League Ah Oo Dhici Kara Todobaadyada Soo Socda – Kooxda.com
Home 2018 January Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Alexis Sanchez, Riyad Mahrez, Daniel Sturridge & Shan Saxiix Oo Premier League Ah Oo Dhici Kara Todobaadyada Soo Socda
WARBIXIN: Alexis Sanchez, Riyad Mahrez, Daniel Sturridge & Shan Saxiix Oo Premier League Ah Oo Dhici Kara Todobaadyada Soo Socda
Suuqa kala iibsiga Janaury ayaa ah mid aad u mashquul ah iyada oo durba la dhameeyay saxiixyo waaweyn oo ay xiddigo badan kooxo kale ku biireen.
Virgil van Dijk ayaa noqday daafaca ugu qaalisan suuqa kala iibsiga kadib markii uu Liverpool ugu biiray lacag dhan 75 milyan oo euro.
Dhanka kale Philippe Coutinho ayaa ugu dambayn dhamaystiray heshiiskii uu u waalanayay ilaa xagaagii hore isaga oo 142 milyan euro ugu biiray Barcelona.
Laakiin xilli ay wax laba todobaad ka badan ka harsan yihiin suuqa kala iibsiga waxa jiri doona saxiixyo badan oo la filayo in ay dhacaan.
iyada oo midaas maskaxda lagu hayo waxa aanu warbixintan ku soo bandhigi doonaa 5 saxiix oo la filayo in ay dhacaan todobaadyada soo socda.
Alexis Sanchez: Xiddigan ayaa bartilmaameed u ah kooxda Man city ilaa xagaagii hore xilli weeraryahanka Arsenal ku dhawaaday in uu ku biiro kooxda Man city maalintii ugu dambaysay suuqa, 29 jirkan ayaa diiday in uu Arsenal heshiis cusub u saxiixo heshiiskiisuna waxa uu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan waxana laga yaabaa in uu xiddigan ugu dambayn dhamaytiro kooxdii uu ilaa xagaagii doonayay.
Riyad Mahrez: Xiddigan reer Algeria ayaa xagaagii si weyn looga doonayay suuqa iyada oo lal xiriirinayay kooxaha Arsenal iyo Roma laakiin xiddigan ayay u suuro gali waday in uu ku biiro koox weyn, 26 jirkan ayaa haatan fursad u haysta in uu koox weyn ku biiro maadama lala xiriirinayo kooxaha Arsenal iyo Liverpool kuwaas oo doonaya in ay badal uga dhigaan coutinho iyo Sanchez.
Theo Walcott: Xiddiga reer England ayaa si weyn u doonaya in uu isaga tago kooxda Arsenal isaga oo doonaya in uu ku biiro koox uu si joogto ah ugu ciyaaro, Theo Walcott ayaan horyaalka kulamo badan u ciyaarin kooxda Arsenal waxana uu doonayaa in uu ku biiro koox uu hoos joogto ah ka helayo waxana lala xiriirinayaa kooxaha Everton,Southampton iyo Ac Milan.
Daniel Sturridge: Waa xiddig kale oo baxsad uga ah kooxdiisa si uu joogto ugu ciyaaro waana xiddig tayo fiican leh laakiin dhaawiciisa badan ayaa keenay in laga waayo shaxda Liverpoo, xiddigan ayaa doonaya in uu ku biiro koox uu si joogto ah ugu ciyaaro iyada oo lala xiriirinayo kooxaha Inter Milan,Newcastle iyo West Ham.
Lucas Moura: Xiddigan reer Brazil ayaa bartilmaameed wakhti dheer u ah kooxda Man United xilli sidoo kale lala xiriirinayay kooxaha Chelsea iyo Arsenal wakhtigii ugu dambaysa, xiddigan ayaa doonaya in uu isaga tago kooxda PSG kadib markii uu boos joogto ah ka waayay kooxda caasimada France maadama uu ka dambeeyo xidigaha Mbappe iyo Neymar.